Kedu ihe m ga-ama banyere elu SEO backlinks iji wuo m website?
Ị maara ihe mere backlinks ji dị ezigbo mkpa na SEO? Nsogbu bụ na ọtụtụ ndị maara ihe isiokwu nke njikọ weebụ dị mma kwenyere na ha na-atụnye aka na mkpebi ikpeazụ nke Google na ịnye ọkwa ogo ọchụchọ - maka weebụsaịtị, blog, wdg.N'ezie, aro dị otú ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya. Otú ọ dị, nchọpụta ndị a na-adịbeghị anya mere ka nkwenye na njikọ profaịlụ ọ bụla nke njikwa weebụ (ma ọ bụ nke ọzọ, n'elu SEO backlinks) bụ n'ezie n'ime ihe atọ kachasị mkpa ndị Google na-achọpụta na ọ ga-achọpụta na ọ na-achọpụta ihe dị na ya.
N'ezie, ihe kachasị mma nke ederede backlinks maara nke ọma site n'aka onye ọ bụla tinyere aka na ụlọ ọrụ nke njikarịcha ọchụchọ.Ma ugbu a mmetụta ha kachasị emetụta aghọwo ọbụna ike karịa mgbe ọ bụla - nke ahụ mere ị ga-eji mara ihe niile banyere echiche nke SEO backlinks, SEO nha nha, azụmaahịa backlink na njikọ ihe ọṅụṅụ. Iji na-enye gị ihe zuru ezu na foto nke Search Engine Optimization na web njikọ, m na-aga na-amalite na ụfọdụ bụ isi ala.
Gịnị na-eme a echiche nke n'elu SEO backlinks?
mbụ, a na okwu bụ "backlink" na-anọchi na-abata njikọ si a-atọ ndị ọzọ website, blog, ma ọ bụ eleghị anya, ọ bụla ọzọ online iyi hụrụ na internet. Ọzọ, okwu "n'elu" na-akọwa njirimara siri ike ma ọ bụ arụmọrụ arụmọrụ nke backlinks - site na echiche nke SEO. E kwuwerị, okwu ahụ bụ "SEO" pụtara na njikọ weebụ dị otú ahụ na-emetụta ọkpụkpọ search engine - ma ọ bụ na ọ dị mma, ma ọ bụ nke ọma-na-adịghị mma, na mgbe ụfọdụ, ọbụna na-anọpụ iche. N'ezie, njirimara nke backlinks na SEO n'ozuzu dabere na set nke isi ihe na echiche ndị a tụlere n'okpuru.
Ka anyị were ụwa na Web dị ka usoro zuru ụwa ọnụ nke nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke saịtị na ibe weebụ.Na ihe niile na - agagharị ebe - ọdịnaya weebụ na - emepe emepe ka a chọpụta ya site ọnụ ọgụgụ na - arịwanye elu nke ndị ọrụ - ọtụtụ mmadụ na - eji ya eme ihe, na - eji, ịkekọrịta, na ijikọ ya. N'ụzọ dị otú ahụ, ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, na blog gosipụtara aka na usoro na-aga n'ihu nke ịmepụta na ikesa ikike ọzọ na peeji nke, PageRank, na ikike ngalaba.
Ụkpụrụ Omume SEO nke weebụsaịtị gị na-eche na a ga - ezigara ya na ọkwa zuru oke - nke ejiri ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke peeji nke na ikike ngalaba, kwadoro ya na njikọta nke elu SEO backlinks. N'igbu ya n'asụsụ Bekee a na-asụ, SEO nha nha anya bụ ikike ị nwere ike ịkwado na Google nke SERPs. Ọ bụ ya.
Njikọ njikọ (a. k. a. ejikọta ọnụ ziri ezi) na-ahụkarị ọkachamara kachasị mma dị ka "ntinye" nke ọnụahịa SEO dum. Ma mụ onwe m, aghọtara m echiche nke mmiri njikọ dịka "ego" nke SEO na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na akwụkwọ weebụ abụọ dị iche iche jikọtara ọnụ. Ya mere, na-ejikọta ihe ọṅụṅụ bụ ihe omuma nke SEO - wega site na ụlọ ọrụ nnabata ma gafee ebe ị ga-aga.
E kwuwerị, ebe a bụ akara ala maka echiche nke elu SEO backlinks. N'ezie, okwu niile dị mkpa e kwuru tupu (i. e. , Ụkpụrụ SEO, njikọ nkwụnye ego na njikọta ihe ọṅụṅụ) bụ ndị obodo SEO mere ka ọ pụta ìhè - naanị ịghọta otú Google si arụ ọrụ n'ezie. N'ezie, ha bụ asụsụ nke njikarịcha oge, ọ bụghị search engine Google. N'okwu dị mfe, ma Google n'onwe ya, na Webmaster Academy emebeghị ka ọ kọwaa kpọmkwem okwu a dị nro. Ya mere, enwere m olileanya na ntinye mkpokọta m nke dị n'elu SEO backlinks ga-aba uru maka gị, ma ọ dịkarịa ala ka ị nweta ya maka mmalite mmalite maka ntinye miri gị ọzọ n'ime ụwa nke Search Engine Optimization Source .